လူများ၊ ရုပ်ပုံလွှာများ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 21
မင်းကိုနိုင် အတက် ခွေးဘီလူး က အကြွေ (သောင်းကြွယ် ရေးသားသည်။) စစ်တွေ ၊ ၂၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ၊ Coral Arakan News ၊ [ obituary...
၀ီရသူ (မစိုးရိမ်) နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၂ 10.11.2012- ရက်နေ့က ဖြစ်သည်။ စာရေးသူသည် စာရေးဆရာကြီး ဦးအောင်သင်းအိမ်သို့ သွားရောက်ဖြစ်ခဲ့၏။ ဆရာကြီးမှာ အသက်(၈၄)နှစ်ကျော် အရွယ်ဖြစ်သည့်အပြင် ခြေဖမိုးများရောင်သည့် ရောဂါကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်လျက်ရှိ၏။ ယခင်ကလို...
Spring Flowers နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၂ ၁၉၄၆….အီတလီမြောက်ပိုင်းက လူစီယာနာ ဆိုတဲ့မြို့ငယ်လေးတစ်ခုမှာ အန်တိုနီယာ ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို မွေးခဲ့တယ်။ အဖေလက်သမား ၊ အမေက ကလေးသုံးယောက်ကိုထိန်းကျောင်းတဲ့သာမန်အိမ်ရှင်မပါ ။ အန်တိုနီယာဟာ အနီးအနားက ဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာ...
ငြိမ်းချမ်းအေး နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၂ “ကျေးဇူးတင်တယ် ကမ္ဘာကြီးရယ် (၁၉၇၁)” တေးစု က စပြီး သူနေထိုင်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးအတွက် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ သီချင်းသံစဉ်တွေနဲ့ ဆယ်စုနှစ် လေးစု တိုင် သီချင်းတေးစုပေါင်းများစွာဖြင့် ပြန်လည်ကျေးဇူးဆပ်ခဲ့တဲ့...
စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၂ မြန်မာ့တပ်မတော်တပ်မဟာ(၁၃) တပ်မင်းကြီး ဇေယျကျော်ထင် ဗိုလ်မှူးကြီးဘဖြူ (ငြိမ်း) No tags for this post. Related posts No related posts.
အရှင်ဇ၀န (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း) စက်တင်ဘာ ၉၊ ၂၀၁၂ စိတ်ဘဏ္ဍာတိုက်ထဲ သိမ်းထားသောအဖြစ်အပျက်တွေဆိုတာက တိုက်ဆိုင်မှု ခလုတ်တချက်ထိလိုက်ရုံနှင့် ဝေါကနဲထွက်ကျလာစမြဲ မ ဟုတ်လား။ ဒီတော့ ပြောမကုန်အောင်ရှိနေတော့သည်။ ကိုခင်ဇော်တစ်ယောက် အတိတ်ရဲ့ခေါ်ရာကို စီးမျောရင်း ဖွင့်ဟလာသော စကားလုံး...
မိုးမခ ကောက်နုတ်စုဆောင်းသည်၊ သြဂုတ် ၁၆၊ ၂၀၁၂ ကျွန်မနာမည် မသန္တာပါ။ ဧရာဝတီတိုင်း အိမ်မဲမြို့နယ် ဦးခင်ညို ဒေါ်မေမေရဲ့ တဦးတည်းသော သမီးပါ။ ကျွန်မအဖေက ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင် တယောက်အနေနဲ့ ထောင်ကျခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်မ အထက်တန်းထိ...
ရွှေည၀ါဆရာတော် အရှင်ပညာသီဟ အထုပ္ပတ္တိအကျဉ်းနှင့် ဖြစ်စဉ်များဘလော့ဂ် မှ ကောက်နုတ်သည်။ မိုးမခ၊ သြဂုတ် ၁၊ ၂၀၁၂ http://shwenyawa.blogspot.com မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ရွှေည၀ါဆရာတော်...
ဆရာမသန်းမြင့်အောင်နဲ့ ဆည်းဆာရိပ်မြင်ကွင်း – Than Myint Aung
ဆရာမသန်းမြင့်အောင်နဲ့ ဆည်းဆာရိပ်မြင်ကွင်း မိုးမခဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၂ စာရေးဆရာမ၊ လူမှုရေးနိုးကြားလှုပ်ရှားသူ၊ နာရေးကူညီမှုအသင်းနဲ့ အခြား ပရဟိတအသင်းများ၏ ဦးဆောင် ဦးရွက် စွမ်းဆောင်သူ ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်နဲ့ သူဝိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ရန်ကုန်အခြေစိုက်...
စာရေးဆရာကြီး သံအမတ်ကြီး ဦးသက်ထွန်းကွယ်လွန်ခြင်း ၀မ်းနည်းမှတ်တမ်း ပြည်သူ့ခေတ်အပတ်စဉ်ဂျာနယ်၊ ဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၂ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်၊ ဒေါက်တာသန့်သော်ကောင်း (Myanmar Book Center)၊ ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း (သချာင်္)၊ တက္ကသိုလ်ရွှေရီဝင်း နှင့် ဂျူနီယာဝင်း...
အငြိမ်းစား သံအမတ်ကြီး ဦးသက်ထွန်း (အသက် ၈၆ နှစ်) သည် ၅.၇.၂၀၁၂ ညပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ အာရှတော်ဝင်အထူး ကုဆေးခန်းတွင် ကွယ်လွန်သွား သည်။ ““ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ည ၇ နာရီ ၅၀...
အရှင်ပညာနန္ဒ ဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၁၂ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က မြန်မာပြည်မှာ နာဂစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း လူဦးရေနှစ်သန်းနီးပါး ရေဘေးဒဏ်ခံခဲ့ရပြီး အစားအသောက် ကျန်းမာရေး နေထိုင်ရေး စတဲ့ကိစ္စတွေ အတော်လေးဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတာ လူတိုင်းအသိပါ။ No tags for...